#Xukumadda Soomaaliya oo soo saartay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada. - Get Latest News From Horn of Africa
#Xukumadda Soomaaliya oo soo saartay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada.
Wasaarada Arrimaha gudaha Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Soomaaliya, ayaa goordhow soo saartay habraac ay sheegtay in loo marayo doorashooyinka ka dhacaya maamul goboleedyada dalka ka jira.
Qoraal ay soo saartay Wasaarada oo Nuqul kamid ah la soo gaarsiiyay Warbaahinta Mustaqbal ayaa ku xusan habka ay tahay iney raacaan maamul goboleedyada, waxaana meelaha ugu soo horeeya ee doorashooyinka ay ka dhacayaan kala ah maamulada Galmudug iyo Jubaland.
Lama oga sida ay go’aamadan u dhaqan gelin doonaan maamulada ay quseyso, maadaama uu khilaafaad kala dhexeeyo dowladda, iyadoo bishan lagu soo kala tagay shirkii Garoowe ee uu madaxweyne Farmaajo gar wadeenka ka ahaa.
Halkan Hoose ka Aqriso Qoraalka Wasaarada Arrimaha Gudaha Soomaaliya: